दलित अधिकारका कुरा फेसबुकमा होईन फिल्डमा गरौं !!! – Ram Kumar Pariyar
Next फोल्डर भित्रको एउटा तस्वीर
Previous सार्थक विहिन छुवाछुत मुक्तीको घोषणा – के घोषणा ?
अनुभुती · २०७२ जेष्ठ २४ 0
रामकुमार परियार |	२०७२ जेष्ठ २४
सामाजिक संजालमा जातिय विभेद , दलित , उन्मुक्ति जस्ता कुराहरु हेर्दा-हेर्दा दिक्क लागि सक्यो । दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर चिनाउन गरिएका यस्ता पोस्टहरुको यथार्थता र आवश्यकताबारे सोच्दैछु । कोठामा बसेर संचारमाध्यमहरुमा छाएका त्यस सम्बन्धी सामाग्री हुबहु सारेर पोस्ट गर्दै गर्दा “यो केका लागि ?” भनेर कसैले सोचेको छ ?
त्यस विरुद्ध लागेको छु भनेर त चिनाईएला तर त्यस्ता पोस्टहरुले कस्तो प्रभाव पार्ला ? गम्भीर भएर विश्लेषण गर्ने हो भने पक्कै पनि आगोमा घिउ थप्ने काम गर्छ । लगभग अन्त्यको संघार तिर पुग्न पुग्न लागेको विभेद र दलितका कुरालाई हामिले नै मलजल गरेर हुर्काउँदै छौँ । अहिले संजालहरुमा छाउने सामाग्रीहरु मध्ये अधिकांसले कथित “दलित” समुदायलाई अझ दलिनु पर्ने / दबिनु पर्ने वातावरण सिर्जना गराउँदैछ – कथित दलित अधिकारकर्मि कै कारण ।
म एक कृयाशिल संचारकर्मी पनि हुँ । समाजमा भएका विभेदजन्य कृयाकलाप , हिंसा , घटना सार्वजनिक गर्नु मेरो कर्तव्य हो । यद्यपि ती सामाग्री सार्वजनिक गर्दै गर्दा त्यसमा पीडितको भावना र संवेदनशीलता सोच्ने गर्छु अनि त्यस प्रकारको सामाग्रीबाट नेपाली समाजमा पर्ने प्रभाव र दीर्घकालीन असरको बारेमा विमर्श गर्छु । तर पछिल्लो समय फेसबुक , ट्विटर जस्ता सामाजिक संजालमा प्रकासित , प्रेशित सामाग्रीहरु मा त्यो भावना नदेख्दा दु:ख लाग्छ । पीडितलाई कानुनी लडाइँ लड्न सहयोग गर्नु भन्दा पनि कसले पहिला पोस्ट गर्ने र बढी शेयर , लाईक गराउने विषयमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।
मेरो आशय विभेदजन्य घटना सार्वजनिक गर्नुहुन्न भन्ने बिल्कुल होईन , खोजी खोजी गर्नुपर्छ , अपराधीलाई कानुनि कार्वाही हुनैपर्छ । तथापि सार्वजनिक गर्दै गर्दा घटनालाई अतिरन्जित भने बनाईनु हुन्न । अनावश्यक पोस्टहरु गरेर पीडितको पिडामा चोट थप्नु हुन्न ।
कतिपय त वास्तविकता बुझ्दै नबुझी विभेदजन्य आशय नभएका घटनाहरुलाई पनि जातिय विभेद भयो भन्दै फलाक्दै हिंड्छौ , फेसबुकका भित्ताहरुमा । यस्ता कृयाकलापहरु बाट विभेदको अन्त्य किन्चित संभव छैन । बरु नगर्नेलाई पनि गर्न उक्साहट मिलेको छ । “अन्त्य भई सक्यो , यस्तो गर्नु हुदैन” भन्ने सोच्न थाली सकेका हरुको दिमागमा पनि “आ…दुनियाँले मानेको कुरा हाम्ले किन नमान्ने , किन नगर्ने” भन्ने सन्देश जाँदैछ । यसबाट दलित अझ दलित बन्दैछ्न । आफुलाई दलित अधिकारकर्मी भनेर चिनाउन चाहनेहरुले सोच्न जरुरी छ ।